Linear Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka - China Qingdao Aedis Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Micro Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Linear Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Soft Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Power Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Kamwene Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Permeable Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
FlowCon mhepo diffusers makuru POWERFLOW mhepo jets inogona kushandiswa yakasiyana siyana mafomu. Vane vakarongeka chaizvo panguva entrapping nokusanganisira mhepo. The refu uzvirasire dzedenga jets anogona zvinobudirira zvinokurudzira nenharo mhepo kuti unotonhorera uriri nzvimbo. Mukanyiwa uye velocity pakati jets zvinogona kukonzera mhepo kuparadzirwa 10'-40 'mhiri diffuser. Ane FlowCon POWERFLOW diffuser kwakabatana kuti masikirwo mhepo Unit, ari kuuya mhepo inogona kuparadzirwa zvakaenzana pamusoro hombe mukugadzira nzvimbo. Kuti aponese simba, unheated mhepo inogona kuendeswa kumusoro kuwadzana noushamwari sirin'i mhepo yechando uye ipapo redirected pasi kuti fefetedza basa nzvimbo muzhizha. A feni uye FlowCon POWERFLOW diffusers anogona kungoti kushandiswa kuridza inodziya sirin'i mhepo pasi kuwadzana unotonhorera uriri mhepo. Energy mari anogona kuva nechiso. In inopisa basa runyararo, nyore mhepo kuparadzirwa kunogona kuvandudza yauinayo. Large POWERFLOW mhepo jets zvinogona sokuronga akaiswa pamwe diffuser kuti fefetedza nomumwe basa zvechitima. PowerFlow jira mhepo ducts kununura evaporative dzaserera mhepo pasi kuburikidza guru zvengarava. PowerFlow mhepo jets siyana 1 "kusvika 6" iri dhayamita. Application kurumbidza zvinosanganisira; maindasitiri, warehousing, uye kugadzira nzvimbo, Gyms, Pools, Retail, Grocery zvitoro, uye Temporary nhengo.
10 oz. Vinyl Coated PolyesterHigh Temperature Poly mutsinga dzinofamba nemukakaPolyester - inorwisa utachiona Polyethylene
Cable denderedzwa rechiedza Suspension HD Rail
Grocery Stores Gyms zveindasitiriManufacturing Areas Pools
Air Jet plugs Condensate wopedza Swederai Tambo Fabric Damper Fittings Internal End Cap
Zipper uye Velcro Connections
Polyethylene akashinga kuti namakemikari akawanda uye achasimuka kuti mhepo takatakura nezvimedu akawanda. It ane uchanyangadika tembiricha kuti 180 ° F uye zvinogona kucheneswa kuburikidza pfapfaidzo hosipaipi kamwene uye bhurasho. Polyethylene ndiwo moto retardant uye asangana ASTM E-84 Zvinokonzerwa 1, AC 167, LC 1005. ICC-ES mushumo: ESR-2646.
Polyester ndiyo shoma mugiredhi Coated jira. It ane uchanyangadika tembiricha 350 ° F uye kunogona laundered muzvikamu zviduku. Polyester ndiwo moto retardant akasangana ASTM E-84 Zvinokonzerwa 1, AC 167, LC 1005. ICC-ES mushumo: ESR-2646.
* Special kuti chete.
Polyester iri shoma giredhi uncoated jira ane inorwisa utachiona mumiririri. It ane uchanyangadika tembiricha 350 ° F uye kunogona laundered muzvikamu zviduku. Polyester ndiwo moto retardant, akasangana ASTM E-84 Zvinokonzerwa 1 uye ari Classified ne Ul.
Vinyl ari Mucheka Coated achamuka kuti mhepo takatakura nezvimedu vakawanda. It ane uchanyangadika tembiricha kuti 180 ° F uye zvinogona kucheneswa kuburikidza pfapfaidzo hosipaipi kamwene uye bhurasho. Vinyl ndiwo moto retardant uye asangana ASTM E-84 Class 1.
XStatic chinhu Anti-kunofambira mberi jira Coated kuti inobudisa ane inorwisa utachiona mumiririri. It ane uchanyangadika tembiricha 250 ° F uye kunogona laundered muzvikamu zviduku. XStatic ndiye moto retardant uye asangana ASTM E-84 Class 1.
High Temp Washington City Offices
High Temp Washington City Offices chinhu Coated Washington City Offices jira kuti ine uchanyangadika tembiricha 500 ° F. It rinogona kushandiswa mamwe mafomu. The Washington City Offices iri Coated uye anogona kuva mhepo jets. High Temp Washington City Offices ndiwo moto retardant, akasangana ASTM E-84 Zvinokonzerwa 1 uye ari Classified ne Ul.
Makakatanwa wire ndiyo mari zvikuru kuita. Available nokuti diameters zvose, Single waya 30 "dhayamita uye kaviri kusvika 48" dhayamita uye katatu kupfuura kuti. Snaphooks vari munzvimbo dzokuzororera dzaiva pamusoro 36 "nzvimbo uye rinowanika mupurasitiki, Stainless simbi. Cable inowanikwa kwakakurudzira, Stainless simbi, uye raive nebutiro zvemapuranga. The Hurongwa rine waya (3/16 "dhayamita), turnbuckle, eyebolts uye waya okusungisa.
b) denderedzwa rechiedza Suspension:
New denderedzwa rechiedza kunetsa kuturika hurongwa (HTS) anopa nechitarisiko FlowCon wako diffuser hurongwa kuti inflated apo mhepo pakugadzirisa kwava kure. pfungwa iyi inogona kushandiswa iri nyore chete musara wire kuturika kana kuroorwa HD njanji kuchengeta FlowCon diffuser tichishungurudzika inflated pasina wokufema. Shoma kubva 10 "36" dhayamita, pfungwa iyi akakwana kuti mafomu apo deflated diffuser ruoko pasi ndiro dambudziko. Sections chinogona kuonekwa pasi uye yakashambidzwa hapana imwe basa. Zvinoriumba zvinosanganisira mwero mumwe musara Makakatanwa wire kana yedu HD chete njanji hurongwa.
New HD anodized aruminiyamu njanji ndiyo yedu shoma njanji hurongwa. Dzakanaka kwakanaka Kutarira kwedu FlowCon jira diffuser hurongwa. Available nokuti diameters zvose, Single njanji 30 "dhayamita uye kaviri kusvika 48" dhayamita uye katatu kupfuura kuti. Gliders vari munzvimbo dzokuzororera dzaiva pamusoro 36 "nzvimbo uye kuwanika epurasitiki. The hurongwa ine HD njanji, njanji zvitsigiso, couplers, uye kutwasuka zvitsigiso (nokukurumidza Links). Nharaunda Bends dziripo kusangana kugokora nharaunda.
Next: Micro Kuyerera Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Air Blower mutsinga dzinofamba nemukaka
Air Canvas mutsinga dzinofamba nemukaka
Air kufefetedza Zvichienderana mutsinga dzinofamba nemukaka
Calf Barn Air mutsinga dzinofamba nemukaka
Guruva Extraction mutsinga dzinofamba nemukaka
Exhibition Center rejira Air mutsinga dzinofamba nemukaka
kuputika Zvinoratidza Zvichienderana mutsinga dzinofamba nemukaka
Fire nemishonga rejira mutsinga dzinofamba nemukaka
Fire nemishonga Zvichienderana mutsinga dzinofamba nemukaka
Zvichienderana Air Ducting
Zvichienderana Air Ducts
Zvichienderana Hvac mutsinga dzinofamba nemukaka
Food Industry rejira Air mutsinga dzinofamba nemukaka
bacon Extraction Zvichienderana mutsinga dzinofamba nemukaka
hembe Industry rejira Air mutsinga dzinofamba nemukaka
Half Round Hvac mutsinga dzinofamba nemukaka
Hvac Insulated mutsinga dzinofamba nemukaka
Insulated Zvichienderana Air mutsinga dzinofamba nemukaka
Insulated Zvichienderana Vent mutsinga dzinofamba nemukaka
Leisure Place Air mutsinga dzinofamba nemukaka
Perforated Zvichienderana mutsinga dzinofamba nemukaka
Pool Fabric Air mutsinga dzinofamba nemukaka
Rectangular Zvichienderana mutsinga dzinofamba nemukaka
Round Air mutsinga dzinofamba nemukaka
Round Fabric Air Ducting
Round Zvichienderana Air Ducting
Round Hvac mutsinga dzinofamba nemukaka
Semi Circle Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Semi Circle Fabric Ducting
Semi Round Fabric mutsinga dzinofamba nemukaka
Semi Round Fabric Ducting
Sports rejira Air mutsinga dzinofamba nemukaka
Supermarket rejira Air mutsinga dzinofamba nemukaka
Textile Zvichienderana mutsinga dzinofamba nemukaka
Textile Industry rejira Air mutsinga dzinofamba nemukaka
Thermal Uye Acoustic mutsinga dzinofamba nemukaka
kufefetedza Air mutsinga dzinofamba nemukaka
kufefetedza Zvichienderana mutsinga dzinofamba nemukaka
Warehouse rejira Air mutsinga dzinofamba nemukaka